Nanova Taovam-pananahana Ho Vehivavy Iray Ao Aceh (Indonezia) Mamory ny Heriny Noho Ny Fivoahan’ny Lalàna Vaovao Anti-Pelaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2015 8:20 GMT
Mitafy hijab i Echa satria izany no lalàna ho an'ny vehivavy ao Aceh. Mpanova taovam-pananahana i Echa, ary rehefa manao sarondoha izy, dia lazainy fa tsy misy olona miantso azy amin'ny anarany. Sary: Carey Wagner. Nahazoan-dlana avy amin'ny PRI
Ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Ruth Morris ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 2 Novambra 2015, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nantsoina hoe endrika mitsiky ho an'ny silamo i Indonezia noho ny fironany ara-pivavahana tony fihetsika. Saingy ho an'i Echa, mpikatroka LGBT ao amin'ny faritany avaratra Aceh, mety mamitaka izany tsiky izany.
Manasazy ny firaisana ara-nofon'ny pelaka amin'ny lamandy, sazy an-tranomaizina, ary koa kapoka kibay ny lalàna vaovao. Ity no dingana farany tamin'ny famoahana tsikelikely ny lalàna Sharia izay mandrara ny lehilahy sy vehivavy tsy manambady tsy hiara-hitaingina kodiaran-ndroa, na mifampitantana eny imasom-bahoaka koa. Tsy azo atao ihany koa ny filokana, ary tsy maintsy manao sarondoha mahazatra fantatra amin'ny anarana hoe hijab ny vehivavy silamo rehetra. Izany no lalàna.
Nampangain'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ho tsy manaja ny maha-olombelona sy tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana ny lalàna vaovao. Nanome fanampiana ara-bola manokana ho an'i Aceh ny governemanta Indoneziana mba hampiharana ny lalàna Sharia 10 taona lasa izay ary tafiditra ao anatin'ny fifanaraham-pilaminana miaraka amin'ny mpisintaka. Tsy voarara ao Indonezia iray manontolo ny firaisan'ny pelaka.
“Hotafihana ny toerana an-takonan'ny LGBT,” hoy i Echa, noho ny lalàna vaovao izay nanan-kery nanomboka tamin'ny faran'ny volana Oktobra.
“Mino aho fa mahazaka tsara ireo trangan-javatra ireo ny silamo,” hoy izy nanampy. “Mino an'Andriamanitra aho, ary Andriamanitra dia tia. Tsy Andriamanitra ireo mandroaka anay. “
Vehivavy nanova taovam-pananahana i Echa (tsy izany no tena anarany. Nangataka izy mba ampiasa solon'anarana izahay ho fiarovana ny mombamomba azy) izay mitafy akanjo mavokely lava hatreny an-tongotra ary sarondoha manga maitso. Tsy misy miseho na dia sangam-bolo aza. Manana ny antony manokana hanaovana hijab izy: Mampanaja izany.
“Tsy tiako ampitoviana amin'ny fivarotan-tena ny endriky ny olona mpanova taovam-pananahana,” hoy izy. Fanampin'izany, ao amin'ny tontolo ara-pivavahana mpandala ny nentin-drazana ao Aceh, tsy antsoina amin'ny anarany izy raha misarona ny lohany.
Mitantana fikambanana iray ao an-toerana antsoina hoe Violet Grey- vondrona mpiaro ny LGBT – i Echa ary miasa amin'ny fanazarana filatroana.
Indray takariva teny an-dalana tao amin'ny renivohitra Banda Aceh, feno tanora mipetraka eo ambonin'ny seza plastika ny fivarotana kafe. Tsy misy toaka eto, fa kafe no manjaka. Manondro hotely iray firesadresahana taloha i Echa – saingy efa tsy izany intsony ankehitriny.
Avy eo mandalo arabe lazain'i Echa fa “toerana mafana” izahay, toeram-pivorian'ny pelaka sy ny olona nanova taovam-pananahana. Maizina androany hariva. Nihidy ny magazay.
Nilaza i Syahrizal Abbas, talen'ny sampan-draharaha Sharia Islamika an'ny governemanta ao an-toerana fa natao hitari-dalana ny olona ho amin'ny fiainana mazoto mivavaka kokoa ny lalàna Sharia, fa tsy hampihorohoro azy ireo. Notsipihany tsara fa tonitony fihetsika ny lalàna Sharia ao Aceh – tsy mitovy amin'ny Sharia ampiharan'ny vondrona mahery fihetsika toy ny Boko Haram sy ny ISIS.
“Te hanana Silamo tsara izahay ao Aceh,” hoy izy.
Saingy izy no tompon-kevitra tanteraka tamin'ny lalàna vaovao izay manasazy ny fiarahan'ny pelaka amin'ny kapoka kibay hatramin'ny 100. Mahazo sazy mitovy amin'izany ihany koa ny fijanganjangana.
Nilaza i Abbas fa misitraka fahalalahana bebe kokoa ny pelaka mpifankatia noho ny olo-tsotra tsy manambady ao Aceh. Tsy afaka miaraka ny mpifankatia mbola tsy mivady, ary tsy mahazo mifampikitika imasom-bahoaka. Saingy ho an'ny lehilahy pelaka sy ny vehivavy, azo atao ny fihetsika tahaka izany.
“Tsy olana ny miaraka mandehandeha. Tsy misy olana ny miaraka mahandro sakafo ao an-dakozia. Tsy olana ny miara-matory amin'ny efitra iray, miray fandriana” hoy i Abbas.
Ny olana, hoy izy, dia raha miray ara-nofo ny mpifankatia.
Tao amin'ny trano fanaovam-bolo iray, miarahaba ireo namana sorena noho ny lalàna vaovao ihany koa i Echa. Raha mampitaha selfies sy mijery tantara mitohy amin'ny fahitalavitra izy ireo, nilaza ny lehilahy pelaka iray miantso ny tenany hoe Mulan fa mametraka ny media sosialy ho manana anjara toerana bebe kokoa noho ny hatramin'izay ny fanamafisana ny fepetra. Manome fomba azo antoka hifaneraserana ny sehatra tahaka ny Blackberry Messenger.
Karazana fialofana azo antoka ny tranon'i Echa. Misy fametrahan'entana milahatra eo amin'ny fidirana. Misokatra ho an'ny mpianatra, namana sy ireo nandositra ny tranony. Nandao an'i Aceh namonjy an'i Jakarta ireo mpikambana sasany ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBT ao an-toerana; tsy nety nandeha kosa i Echa.
“Tsy maintsy mitady tetikady hiantohana ny fahatanjahany sy heriny hatrany izahay. Ny zava-dehibe ho anay dia ny ho tafavoaka velona, ​​na dia mila mandeha lavidavitra kokoa any am-piafenana aza izahay,” hoy izy. Avy eo hoy izy nanampy: “Tsy maintsy maka bahana izahay ary mizaka ny lalao, mandeha miaraka amin'izay iriana.”
Ruth Morris sy Carey Wagner no nitatitra ny vaovao avy ao Indonezia izay nahazo vatsy avy amin'ny International Reporting Project.
Shina 7 ora izay